Miyuu diyaar yahay thomas Partey kulanka habeen dambe Arteta ayaa ka hadlay.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Miyuu diyaar yahay thomas Partey kulanka habeen dambe Arteta ayaa ka hadlay.
Mikel Arteta ayaa go’aan dambe ka gaari doona xiddigiisa qadka dhexe ka hor kulanka habeenka khamiista ee Europa League Thomas Partey ayaa sameyn doona tijaabada jimicsiga arbacada madaama uu dalbanayo inuu diyaar u noqdo kulanka muhimka ah ee Arsenal ay la ciyaarayaan Benfica.
Xiddiga qadka dhexe ayaan soo muuqan tan iyo markii uu dhaawac ka soo gaaray Aston Villa dhaawac muruqa ah ayaa horaantii bishaan uu la kulmay waxaana uu seegay seddexdii kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan.
Laakiin wuxuu ku soo laabtay tababarka buuxa Isniinta wuxuuna u duuli karaa Athens lugta labaad ee ciyaartii ugu dambeysay wareega 32 europe league isagoo bixinaya inuu ka helo dhamaan shaqaalaha caafimaadka.
Tababaraha Arsenal ayaa yiri: “Thomas aad ayuu ugu dhow yahay Waxa uu heystaa tijaabada ugu dambeysa maanta oo arrbaco ah tababarka iyo hadii uu dareemayo wanaag, wuxuu diyaar u noqon doonaa inuu ciyaaro ciyaaraha soo socda Si kasto uu arsenal kulankaan ugu weyn yahay ma dooneysa ineey halis gelisoThomas Partey.
Waxa uu laba jeer ka soo laabtay dhaawacii hore ee bowdada ee soo gaadhay bishii Nofembar, laakiin labada jeerba mar kale ayuu jabsaday oo lagu qasbay inuu fadhiisto kooxda weyn ee xilli ciyaareedka.
Tan iyo markii ay la soo saxiixatay xagaagii hore Partey waxaa lagu soo bilaabay kaliya 10 kulan tartamada oo dhan, taasi ma ahan mid ku filan oo Arsenal si xun ayey u tebtay.
Arteta wuxuu uga baahan yahay qadka dhexe sidaa darteed markii uu soo laabto waqtigan, Arsenal waa inay hubisaa inuu taam yahay mana jirto wax qatar ah oo uu ku qabo inuu soo laabto.
Waxaan isticmaalnay [bedel]. Gabi ahaanba wuu fiicanyahay, laakiin sida iska cad hadda waxaan ubaahanahay inaan raacno borotokoolka mana awoodi doono inuu safro Xitaa haddii Partey loo gudbiyo taam ahaanshaha kulanka habeenka khamiista uma badna in lagu soo bilaabi doono.
Previous articleBarcelona oo ku dhawaaqday Safka ay kaga hortegeyso kooxda Elche.
Next articleManchester united oo andre Silva ku badalaneysa Edson Cavanni.